Announcements-old - Mandalay Catholic Archdiocese
ဂျွန် ၃၀၊ ၂၀၁၂
စိန့်ပီတာကျောင်းပွဲတော် ဖိတ်ကြားလွှာ (အမရပူရမြို့)
မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး၊ ပေါလ်ဇိန်ထုန်းဂရောင်နှင့် ဆရာတော် နိကောလပ်စ် မာန်ထန်း၊ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး၊ စိန့်ဂျိုးဇက် သီလရှင်များနှင့် အမရပူရမြို့မှ ဘာသာဝင်များတို့သည် စိန်ပီတာဘုရားကျောင်းပွဲတော်ကြီးကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါ၍ ပွဲတော်သို့ကြွရောက်ပါရန် လေးမြတ်စွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
၃၀.၆.၂၀၁၂ စနေနေ့နံနက် (၈း၀၀)နာရီအချိန်တွင် ပွဲတော် မစ္ဆားတရား စတင်မည်။
မစ္ဆားတရားအပြီး ကိုယ်တော်မြတ် စက္ကရမင်တူးလှည့်လည် အပူဇော်ခံခြင်း။
ကြွရောက်လာကြသော ဆရာတော်ဘုရားများနှင့်တကွ ဘုန်တော်ကြီးများ၊ သီလရှင်များ၊ ကိုရင်များ၊ ဘာသာတူများအာ နေ့လည်စာဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးမည်။
နံနက်၁၀း၀၀ နာရီတွင် ဗုဒ္ဓဘုန်းတော်ကြီးများ သီလရှင်များအား ဆွမ်းကျွေးခြင်း အစီအစဉ် ရှိပါသည်။
စိန်ဂျိုးဇက်သီလရှင်များနှင့် ဘာသာဝင်များ၊ အမရပူရမြို့
ဂျွန်လ ၁၆၊ ၂၀၁၂
မိတ္ထီလာမြို့၊ စိန့်အန်ထော်နီ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းပွဲတော် ဖိတ်ကြားလွှာ
စိန်အန်ထော်နီ ဘုရားကျောင်းပွဲတော် ဖိတ်ကြားလွှာ
နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော မိတ္ထီလာမြို့၊ စိန့်အန်ထော်နီ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းပွဲတော်ကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ကြွရောက်ပါဝင်အားပေးကြပါရန် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးနှင့် ဘာသာဝင်များအားလုံးကို လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
၁၅.၆.၁၂ (အဖိတ်နေ့ညနေ) ၅း၃၀နာရီတွင် မစ္ဆားပူဇော်ခြင်း၊ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တော်မြတ်ကောင်းကြီး မင်္ဂလာ ရှိပါမည်။
၁၅.၆.၁၂ နေ့လည်စာနှင့် ညနေစာဖြင့် ဧည့်ခံပါမည်။
၁၆.၆.၁၂ (ပွဲတော်နေ့မနက်) ၈း၀၀ နာရီတွင် မစ္ဆားပူဇော်ခြင်း ရှိပါမည်။
၁၆.၆.၁၂ နေ့လည်စာဖြင့် ဧည့်ခံပါမည်။
စိန့်အန်ထော်နီ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ မိတ္ထီလာမြို့။
သောတရှင် တွေ့ဆုံပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ
နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ သောတရှင်များ တွေ့ဆုံပွဲကို လာမည့် ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁၄ ရက်၊ (စနေနေ့)တွင် ၂၅လမ်းနှင့် ၈၁လမ်းထောင့်ရှိ မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးကျောင်းတိုက်၊ သာသနာ့ခန်းမဆောင်တွင်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၂ ရက်၊ (တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ဖာတီမာဘုရားကျောင်း၊ ပြည်လမ်း၊ သာသနာ့ခန်းမဆောင်၌လည်းကောင်း စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
မန္တလေး၌ ကျင်းပည့် သောတရှင်တွေ့ဆုံပွဲသို့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ရေဒီယိုဗဲရီးတာ့စ် အာရှသမ္မာတရား အသံလွှင့်ဌာန၏ အထွေထွေမန်နေဂျာ Rev. Fr. Roberto M. Ebisa, SVD နှင့်တကွ အာရှသမ္မာတရား အသံလွှင့်ဌာန မြန်မာဘာသာ အစီအစဉ်၏ ဌာနမှူး ဘုန်းတော်ကြီး ရစ်ချက်လှမင်းဦးနှင့် မမာလာတို့ တက်ရောက်ကြကာ သောတရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ တွေ့ဆုံပွဲသို့ ကြွရောက်ကြပါရန် သောတရှင် တစ်ဦးတစ်ယောက်တိုင်းစီအား လှိုက်လှဲပျူငှာစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ကျင်းပမည့်ရက်စွဲ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၄ ရက်၊ စနေနေ့။
နေရာ - မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး ကျောင်းတိုက်၊ သာသနာ့ခန်းမဆောင်၊ ၂၅လမ်းနှင့် ၈၁လမ်းထောင့်၊ မန္တလေးမြို့။
အချိန် - နံနက် ၉း၀၀နာရီမှ နေ့လည် ၁၂း၀၀ နာရီအထိ။
မှတ်ချက် - အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ တက်ရောက်လာသူများ အားလုံးတို့အား နေ့လည်စာဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရပ်ဝေးမှ တက်ရောက်လာကြသူများအတွက် နေရာထိုင်ခင်းနှင့် စားသောက်ရန် စီစဉ်ပေးထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၃-၄၊ ၂၀၁၂
လုဒ်မယ်တော်သခင်မ ဂူလှိုင်ပွဲတော် ဖိတ်ကြားလွှာ(မြင်းခြံမြို့)
လုဒ်မယ်တော်သခင်မဂူလှိုင်ပွဲတော် ဖိတ်ကြားလွှာ (မြင်းခြံမြို့)
နေ့ရက် ၃.၂.၂၀၁၂ (သောကြာနေ့)၊
အချိန် ညနေ (၅း၃၀)နာရီ၊
နေ့ရက် ၄.၂.၂၀၁၂ (စနေန့)
အချိန် နံနက် (၇း၃၀)နာရီ
၃.၂.၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်စာ/ညစာ
၄.၂.၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်စာဖြင့် ကျွေးမွေးဧည့်ခံပါမည်။
ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးနှင့် ဘာသာဝင်များ၊ မြင်းခြံမြို့။
ဇန်န၀ါရီ ၂၄-၂၅၊ ၂၀၁၂
စိန်ရတု ဂျူဗလီပွဲတော် ဖိတ်ကြားလွှာ(ဇော်ဂျီရွာ)
စိန်ရတု ဂျူဗလီပွဲတော် ဖိတ်ကြားလွှာ (ဇော်ဂျီရွာ)
မန္တလေး ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ ဇော်ဂျီရွာရှိ စိန်ဂျိုးဇက်ကလေးများဂေဟာ (၇၅)နှစ် စိန်ရတု ဂျူဗလီပွဲတော်ကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါ၍ ကြွရောက်ချီးမြှင့်ပေးပါရန် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် ၂၄.၁.၂၀၁၂ (အင်္ဂါနေ့)၊
အချိန် ညနေ (၄း၃၀)နာရီ၊
နေ့ရက် ၂၅.၁.၂၀၁၂ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
အချိန် နံနက် (၈း၀၀)နာရီ
ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးနှင့် သီလရှင်များ၊ ဇော်ဂျီ
ဒီဇင်ဘာ ၂၉-၃၀၊ ၂၀၁၁
မန္တလေး ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ ဆင်ဖြူရွာ သန့်ရှင်းသောအိမ်ထောင်စု ဘုရားကျောင်းပွဲတော်ကြီးကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါ၍ ကြွရောက်ပါရန် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် ၂၉.၁၂.၂၀၁၁ (ကြာသပတေးနေ့)၊
အချိန် ညနေ (၄)နာရီ၊
ပွဲတော်အကြိုမစ္ဆားတရားနှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခြင်း၊ ကိုယ်တော်မြတ်ကောင်းကြီး
နေ့ရက် ၃၀.၁၂.၂၀၁၁ (သောကြာနေ့)
အချိန် နံနက် (၈)နာရီ
ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၁
မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ၏ ရဟန်းတော်များ လစဉ်ဥပုသ်စောင့်ပွဲ၌ Fr. Thomas ထွန်းဝင်းထွန်း (သရက်ခုန်လက်ထောက်ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး)အား ညောင်ပင်သာ သာသနာအုပ်စု၏ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ပြောင်းရွှေ့ခန့်အပ်ကြောင်း မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ဘုရား His Grace Archbishop Paul Zinghtun Grawng ၏ လွှဲအပ်ချက်အရ ဂိုဏ်းထောက်ဘုန်းတော်ကြီး Msgr. John Mg Nee မှ ကြေငြာခဲ့ပါသည်။
ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပင့်ဆောင်ခြင်းခံရသော မယ်တော်သခင်မ ကျောင်းပွဲတော်ဖိတ်ကြားလွှာ(ချောင်းဦးမြို့)
ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပင့်ဆောင်ခြင်းခံရသော သခင်မ ဘုရားကျောင်းပွဲတော်ဖိတ်ကြားလွှာ (ချောင်းဦးမြို့)
နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော စစ်ကိုင်းတိုင်း ချောင်းဦးမြို့၊ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပင့်ဆောင်ခြင်းခံရသောသခင်မ ဘုရားကျောင်းပွဲတော်ကြီးကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါ၍ ကြွရောက်ပါရန် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
၁၅.၈.၂၀၁၁ (တနင်္လာနေ့)၊ နံနက် (၇)နာရီ၊ ပွဲတော်အကြိုမစ္ဆားတရား၊
ညနေ (၅) နာရီ၊ မယ်တော်ဆင်းတုတော်များ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်း၊
၁၆.၈.၂၀၁၁ (အင်္ဂါနေ့)၊ နံနက် (၇)နာရီ၊ ပွဲတော်မစ္ဆားတရားတော်မြတ်
ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပင့်ဆောင်ခြင်းခံရသော မယ်တော်သခင်မ ကျောင်းပွဲတော်ဖိတ်ကြားလွှာ(ချမ်းသာရွာ)
နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရေဦးမြို့နယ်၊ ချမ်းသာရွာ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပင့်ဆောင်ခြင်းခံရသော မယ်တော်သခင်မ ကျောင်းပွဲတော်ကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါ၍` ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် ၁၄.၈.၂၀၁၁ (တနင်္ဂနွေနေ့)
အချိန် ညနေ (၄း၃၀)နာရီ နိုဗီနာ အပိတ်နှင့် ပွဲတော်အကြို မစ္ဆား
အချိန် နံနက် ၇း၀၀ နာရီ (ပွဲတော်မစ္ဆားတရားတော်မြတ်နှင့် ကျောင်းဆောင်သစ်ကောင်းချီးပေးခြင်း အခမ်းအနား)
ညနေ (၄း၃၀)နာရီ မယ်တော်ဆင်းတုတော်များ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တော်မြတ်ကောင်းကြီး
(၁၄)ရက်နေ့ - ညနေစာ
(၁၅)ရက်နေ့ - ည/မနက်စာ
(၁၄-၁၅) ည (အရပ်ဇာတ်)
ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးနှင့် ဘာသာတူများ (ချမ်းသာရွာ)
Formation of Mandalay Information Technology Committee (MITC)
Our Holy Father Pope Benedict XVI is keenly aware of the challenges, possibilities and opportunities of the internet. This new media is not only the tool for imparting the love of God. It is in itself the venue and the field that needs to be given the values of the Gospel. The role of Christian is vital. I am happy, therefore, to have of announcing the formation of the MITC.
Fr. John Soe Tint
Fr. George Khin Mg Htwe
Fr. Edmond Nay Kyaw Lwin
Fr. Augustine Win Myint
Fr. Paul Thet Khaing
Fr. Patrick Soe Htun
Mr. Than Hlaing Oo
Mr. Zaw Myo Htun
Mr. Htun Min Zaw
Sr. Cecilia San Yu Maw
I hope you can start off by getting together to identify the practical steps that can be taken through the website of Mandalay: www.mandalayarchdiocese.com
With prayers and best wishes for the new venture,
Archbishop of Mandalay
ကျောက်ဆည်ခရိုင် စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် ဇော်ဂျီကျေးရွာတွင် နှစ်စဉ် ကျင်းပမြဲ ဖြစ်သော ဆင်းရဲသားတို့အား အစဉ် ကူညီ စောင့်ရှောက်တော်မူသော ရဟန္တာ စိန်ဗင်းဆင်း ဒီပေါလ် ကျောင်းပွဲတော်အား အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ကြွရောက်ပါရန် ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ပွဲတော်အဝင်နေ့ ၁၈-၇-၂၀၁၁ (တနင်္လာနေ့)
ညနေ (၄း၃၀) နာရီ - ဧည့်သည်တော်များအား ညစာထမင်းနှင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးခြင်း။
ညနေ ( ၅း၀၀) နာရီ - ရဟန္တာ စိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ် ဆင်းတုတော်အား ကျေးရွာအတွင်း လှည့်လည်အပူဇော်ခံခြင်း။
ညပိုင်း - ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်ဖြင့် ဧည့်ခံခြင်း။
ပွဲတော်နေ့ကြီး ၁၉-၇-၂၀၁၁ (အင်္ဂါနေ့)
နံနက် (၈း၀၀) နာရီ - ပွဲတော် မစ္ဆားတရားတော်မြတ်အား ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော်ဘုရား မှ ဦးဆောင် ဟောကြားခြင်း။
နံနက် (၁၀း၀၀) နာရီ - ပွဲတော်လာ ဧည့်သည်တော်များကို ထမင်းဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးခြင်း။
မာရီယားမာဒလေနား ဘုရားရှိခိုးကျောင်းပွဲတော် ဖိတ်ကြားလွှာ(ရွာတော်)
စစ်ကိုင်းတိုင်း ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ရွာတော်ကျေးရွာ မာရီယား မာဒလေနား ဘုရားရှိခိုးကျောင်းပွဲတော်သို့ ကြွရောက် ချီးမြှင့် အားပေးကြပါရန် ခင်မင် ရင်းနှီးစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ပွဲတော်အကြိုနေ့ ၂၁.၇.၂၀၁၁ (ကြာသပတေးနေ့)
ညနေ - (၄း၃၀) နာရီ - မစ္ဆားတရားတော်မြတ်နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခြင်း
ညပိုင်း - ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်။
ပွဲတော်နေ့ ၂၂.၇.၂၀၁၁ (သောကြာနေ့)
နံနက်ပိုင်း - (၇း၃၀) နာရီ - ပွဲတော်နေ့မစ္ဆားတရားတော်မြတ်။
စိန်ဂျော်ကင်းနှင့် စိန်အန်နားကျောင်း ပွဲတော် (မြောက်ကိုင်း)
စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် မြောက်ကိုင်းကျေးရွာတွင် နှစ်စဉ် ကျင်းပမြဲဖြစ်သော စိန်ဂျော်ကင်းနှင့် စိန်အန်နား ကျောင်းပွဲတော်အား အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ကြွရောက်ပါရန် ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ညနေ ( ၅း၀၀) နာရီ မစ္ဆားတရား၊ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်း၊ ညစာ။
နံနက် ( ၇း၃၀) နာရီ မစ္ဆားတရားနှင့် စုပေါင်းထိမ်းမြား မင်္ဂလာ စက္ကရမင်တူးခံယူခြင်း၊
ရွှေနှလုံးတော် ကက်သီဒြယ်ဘုရားကျောင်း ပွဲတော်ကို လာမည့် ဇူလိုင် လ(၁)ရက်နေ့ ညနေ (၅း၀၀)နာရီ တိတိတွင် ကျင်းပ မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ရပ်ဝေးရပ်နီးမှ ဘာသာဝင် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအား ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးနှင့် ကက်သီဒြယ် သာသနာ အုပ်စုမှ ဘာသာဝင်များမှ ဖိတ်ကြားထားပါသည်။။
ဘုန်းတော်ကြီးများ တာဝန် ပြောင်းရွေ့ခန့်ထားခြင်း။
မန္တလေး ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ လစဉ်ပုံမှန် ဝတ်စောင့်ပွဲကို မေလ (၃၁) မှ ဂျွန်လ (၁) ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ် သွားခဲ့ကြရာ ၀တ်စောင့်အပြီးတွင် ဘုန်းတော်ကြီးများကို တာဝန်ပြောင်းရွေ့ခန့်ထားခဲ့ရာ အောက်ပါ အတိုင်း တာဝန်ခန့်ထားခဲ့ပါသည်။
ဘုန်းတော်ကြီး အမည် တာဝန်ယူရမည့် သာသနာအုပ်စု
1. Rev Fr. Anthony Zaw Win St. Augustine's Church, Magwe (မကွေး)
2. Rev Fr. Joseph Thet Lwin St. Theresa's Church, Chauk (ချောက်)
3. Rev Fr. Anthony Aung Myo Win St. John the Baptist Church, Nabet (နဘက်)
4. Rev Fr. Solomon Htun Min Zaw The Assumption Church, Chan-Thar-Ywar (ချမ်းသာရွာ)
5. Rev Fr. Michael Ko Ko Gyi Nativity of Our Lady Church, Maygon (မေဂွန်)
6. Rev Fr. Patrick Soe Htun Chinese Mission
7. Rev Fr. Hubert Win Nyo and
8. Rev Fr. Thomas Htun Win Htun St. Joseph's Church, Thayetkhon (သရက်ခုံ)
9. Rev Fr. Cyprian Aung Win Further Study
10. Rev Fr. Edmond Nay Kyaw Lwin Mary Help of Christian Church, Sagaing (စစ်ကိုင်း)
11. Rev Fr. John Soe Tint St. Joseph's Church, Mandalay (မန္တလေး လဖုန်း)